Dad ku dhintay dagaalo ka dhcay Muqdisho - BBC News Somali
Dad ku dhintay dagaalo ka dhcay Muqdisho
Image caption Maleeshiyada Islaamiyiinta
Dagaalo si goos goos ah uga soconaya shalay galinkii danbe iyo maanta degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada DKMG ah iyo kuwa xarakada Alshabab ayaa sababay dhimashada sagaal ruux oo isugu jira rayid iyo dhinacyadii dagaalamayay soddon kalana waa ay ku dhaawacmeen.
Dagaalada goos gooska ah ee shalay iyo maanta soconaya ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen degmooyin deris la ah degmada Cabdicasiis, sida Kaaraan Shibis Shangaani iyo Xamar Weyne.
Waxaa maanta meelaha ay dad rayid ah ku dhaawacmeen ka mid ah suuqa Xamar Weyne, oo mar mar ay soo gaareysay rasaasta wiiftada ah waxana sidoo kale la maqlayay hub culculus oo ay ridayeen ciidamada midowga Afrika ee fariisinka ku leh dhismaha Hoteelkii burburay ee Curuba kuwaa oo taageerayay ciidamada dowladda. Shiikh Cali Maxamuud Raage iyo Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa shir jaraaid oo ay ku qabteen maanta xarunta gaadiidka booliska, waxaa ay sheegeen in ay xaruntaasi kula wareegeen dagaalkii dhacay shalay galinkii danbe.
Waxaa xilligaa halkaasi ay wariyayaasha ku casuumeen ku dhacayay madaafiic ay ku dhaawacmeen dhawr wariye oo ay soo gaareen dhaawacyo fudud kuwaas oo ay ku jiraan wariyayaal ka kala tirsan HornAfrik iyo Aljasiira. Shiikh Mukhtaar Roobow oo ay wariyayaashu weydiiyeen dhaawac dhawaan soo gaaray inuu jiro ayaa beeniyay in ay wax waxyeelo ah soo gaareen muddoyinkii u dabeeyay, isagoo intaa raaciyay in ay tahay been ay baafinyaan wax uu ku tilmaamay gaalo. Sarkaal u hadlay meleteriga dowladda oo ka warbxinayay dagaalada, ayaa sheegay in ay caabiyeen malleeshiyooyin weerar ku soo qaaday fariisimo ay joogeen ciidamada dowladda waxana uu gaashaanka ku dhuftay sheegashada Alshabab ee ah in ay qabsadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda KMG ah. Dhaawacyada shalay iyo maanta ayaa waxa lakala dhigay cisbitaalada Keydsaneey iyo Madiina, waxaana maamulka isbitaal Madiina ay sheegeen maanta in ay soo gaareen 20 qof oo dhaawacyo kala duwan qabo.